Saraakiisha ayaa xaqiijiyey in weerarkan oo aroortii ka dhacay degmada Kohistan ee gobolka waqooyi ee Faryab lagu dilay 12 ka tirsan ciidamada Afghanistan, islamarkaana lagu dhaawacay 13 kale, ka hor inta aysan Taliban qabsan degmada.
Afhayeen u hadlay gobolka ayaa VOA u sheegay in ciidamada Afghanistan ay dib uga gurteen degmada, si looga fogaado waxeelo gaarta shacabka.
Islamarkaana, ciidamada Afghanistan ayaa dagaal xoooggan kula jira xooggaga Taliban, meel u dhow xarunta booliska Moqur, oo ah degmo rabashado badan oo ka tirsan gobolka bartamaha bari ee Ghazni.
Saraakiisha ammaanka degaanka ayaa xaqiijiyey in la dilay ugu yaraan 6 ka mid ah shaqaalaha amniga. Warbaahinta Afghanistan ayaa sheegay in barasaabka degmada uu ka mid yahay ugu yaraan 26 qof oo lagu dhaawacay isku dhacyada, oo sidoo kale labaatan ka mid ah muqaawamada lagu dilay.